Shir jaraa'id: SAS way sii wadi doontaa duulimaadyadeedii - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Duulimaadkii oo sii socon doona. Sawirle: Johan Nilsson / Scanpix.
Shir jaraa'id: SAS way sii wadi doontaa duulimaadyadeedii
La daabacay måndag 19 november 2012 kl 17.16
Kadib heshiis ey qalinka ku duugeen ururka shaqaalaha shirkadda dayuurradaha ee Danmark CAU iyo maamulka shirkadda, ahaana heshiiskii ugu dambeeyey ee la dhoowrayey ayuu shir-jaraa'id ku qabtay xarunta shirkadda hoggaanka sare ee shirkadda dayuurradaha ee SAS, halkaasina ey ku sheegeen in shirkaddu hoowlaheedii halkii ka sii wadan doonto , islamarkaana ey dardar-gelin doontaan.
Waxay ahayd xisaab ay aad u sahlaneyd fahamkeedu. Dhaqaalaha oo ku sugnaa inuu gabaabsiyo.
- Maanta waa maalin farxadeed. Waxaannu haynaa shirkad weli nool oo ka qeyb-qaadan karta suuqa tartanka. Iimana muuqdaan xaalad ka wanaagsan ee la heli kari lahaa, sida uu sheegay ku simaha maamulka sare ee shirkadda Wallenberg.
- Iminka xaaladdu waa "Business as usual - hoowluhu iney halkoodii ka sii socdaan", waxaan iminka shirkaddu u duulaysaa sidii ay u duuli jirtay, sida uu sheegay Schur, madaxa maamulka sare ee shirkaddu.
In xayiraad ku timid saaka qaar ka mid ah duulimaadyadii shirkadda, ayey ugu wacnaayeen xanuunno fara badan oo hoowl-wadeennada dhankooda la xiriira, sida lagu macneeyey, hase-yeeshee iminka hoowluhu u dhaqaaqi doonaan sidii horay loogu talo-galey, sida uu sheegay.